🥇 ▷ Maqaarka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee Fortnite ayaa sii daayay nooca 10.10 update ✅
Maqaarka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee Fortnite ayaa sii daayay nooca 10.10 update
Ugu dambeyntii cusboonaysiinta nooca 10.10 ayaa la gaarey Fortnite. Kadib maalin dhan oo dib u dhac ah, keen Zombies, Retail Row, iyo inbadan. Miirayaasha ayaa helay hargaha cusub iyo waxyaabaha la isku qurxiyo oo lagu daray faylasha ciyaarta.
Muuqaalka ugu weyn ee cusboonaysiinta cusub, dabcan, waa Isbeddelka khariidadda iyo soo-celinta zombies. Ama “jinniyo” sida saxda ah loogu yeedhay. In kasta oo nasiib wanaag u muuqdo sidaas Zombies-ka ayaa lagu xadidi doonaa Retail Row.
Aaladda wasaqda wasakhda ah ee DIRT sidoo kale waxay leedahay isbeddelo., inkasta oo laga yaabo inaysan u weyneyn sidii ciyaartoydu filayeen. Iyadoo dejinta cusub iyo dejinta laser taas oo siineysa ciyaartoy ka soo horjeedda fursado wanaagsan.
Infinity Blade ee muranka dhaliyay wuxuu sidoo kale soo laabtay Fortnite. Laakiin nasiib wanaag kaliya qaab gaar ah oo loo hibeeyay isticmaalkiisa, oo loo yaqaan Sword Fight LTM. Waxaa loo heli karaa koox ahaan ama duo..
Sida cusboonaysiin kasta oo cusub, Epic waxay u muuqataa inay ku dartay waxyaabaha la isku qurxiyo ee cusub galka ciyaarta. Diyaar u ah in lagu bilaabo dukaanka alaabta goor dhaw.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad aragto, kuwa macdan qodayaasha ah, sida caadiga ah, waxay qodeen faylalka laga helay Maqaarka, dhawaaqa asalka, hubka wax lagu duubo iyo waxyaabo kaloo badan ayaa soo socda.
Nooca cusub ee maqaarka oo jilicsan 10.10
Dhammaan qalabka la sifeeyay ee gaadha Fortnite oo leh ‘patch v10.10’, oo iska leh FNBRHQ iyo VastBlastt.
Frelete: raac tallaabooyinka, guul aamin ah “
Recon Ranger – Khabiirka Sirdoonka ee Ranger
Fennix – Weligiis kama Dulna
Masters of Guushan Harmonious
Cadaadiyaha: waqtigu wuu dhammaanayaa wuxuuna doonayaa aargudasho
Cusboonaysiinta ugu sarreysa ee la cusbooneysiiyay ee nooca 10.10
Kuwa macdan qodayaasha ah ayaa iyaguna helay fursado cusub oo goosashada.
Shaandheynta cusboonaysiinta v10.10
Kooxdaan cusub ku rux galka dambe ee ciyaartaada, haddii ay jirto.
Exo-Spine – had iyo jeer waxay wataan gurmad (qayb ka mid ah awood sheegashada)
Kunai Shield: xasilloon oo diyaar ah (qayb ka mid ah koox dagaalyahanno caqli badan)
Dhabarka gadaashiisa – Nolosha adag
Banner Ilaalin – Shakhsi u eeg muuqaalkaaga adiga oo dooranaya midabkaaga iyo midab xirida.
Hubka siidaayay ee nooca 10.10 cusboonaysiinta
Ku buuxi hubkaaga qaabkan cusub.